Fihaonan'ny Ben'ny Tanàna an-tanan-dehibe tamin'ny Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta teto Mahazoarivo | Primature
27 avril 2017 30 janvier 2018
Mahazoarivo, 07 Aprily 2017 – Noraisin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, no sady Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjarampahefana, Mahafaly Solonandrasana Olivier ireo solontenan’ny Ben’ny Tanàna an-tanàn-dehibe, izay nahitana ny Ben’ny Tanàna avy any Antsirabe Razanakolona Paul , ny Ben’ny Tanànan’i Toamasina Elysée Ratsiraka , ny Ben’ny Tanàna avy eto Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana, ny Ben’ny Tanànan’i Fort-Dauphin Randrianiaina Georges Mamy, ny Ben’ny Tanànan’i Mahajanga Andriantomanga Mokhtar Salim, ary ny Ben’ny Tanànan’i Diego, Djavojozara Jean Luc Désiré .
Voaresaka nandritra ny fihaonana androany ny mahakasika ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina sy ny fitondrana foibe, ny lafin’ny fitsinjarampahefana ary ny resaka fampiatoana ireo ben’ny tanàna amin’ny asany.
Anisany teny notsindrian’ny Praiminisitra hatrany nandritra ny fihaonana fa miompana amin’ny fitsinjarampahefana tena izy ny fanjakana. Fiaraha-miasa no tadiavina ary tsy maintsy hirosoana izay mba hisian’ny fampandrosoana. Tokony ho hita taratra hatrany izay fiaraha-miasa izay. “Ny fahombiazan’ny kaominina no fahombiazan’ny Fitondram-panjakana ary ilaina ny fiaraha-miasa” hoy ny Lehiben’ny Governemanta. Nanamafy hatrany ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier fa tsy misy tombontsoa amin’ny fanakorontanana sy fanakatsakanana ny asan’ny Ben’ny tanàna.
Tamin’ny firesahany tamin’ny mpanao gazety no nanambara ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanàna an-tanàn-dehibe, avy any Antsirabe, Razanakolona Paul fa: “Vonona izahay hiaraka hampandroso ny any ifotony ao anatin’ny kaominina iadidianay tsirairay avy. Vonona hiara-miasa ny fanjakana sy ny Ben’ny tanàna. Raha araka ny fihaonana natao androany dia tsy mihatra ny fampiantoana ny Ben’ny Tanàna fa manohy ny asany. Tsy mbola nisy ny nampijanona fa ny mpanolontsaina no nampijanona”
“Tsy misy ambadika politika ny fampiatoana ny ben’ny tanàna fa resaka tombontsoa ao anatin’ny samy mpanolontsaina izany” hoy hatrany ny Ben’ny tanànan’i Antsirabe.
← Ouverture de la 2ème édition de L’african Business Connect, rencontre d’affaires entre Madagascar et les opérateurs Marocains
Fiarahaban’ny mpikambana ao amin’ny governemanta ny Praiminisitra mivady →